काठमाडौंका सडकमा सवारी चाप, उल्लंघनकर्ता बढे वा टाइम कार्ड मानिएन ? – Mission Khabar
काठमाडौंका सडकमा सवारी चाप, उल्लंघनकर्ता बढे वा टाइम कार्ड मानिएन ?
मिसन खबर २८ बैशाख २०७७, आईतवार १३:२१
काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि भन्दै सिंगो देशलाई लकडाउन गरिएको ४८ दिन पुग्यो । सरकारले अर्थतन्त्र केही चलायमान गराउन भन्दै विभिन्न ४२ बिधाका उद्योग, पसल अनि औद्योगिक क्षेत्र र विशेष औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्न छुट दिएको भोलिपल्टै सडकमा सवारीसाधनको भीडभाड देखेपछि सरकार आत्तिएर टाइम कार्ड लागु गर्न बाध्य भयो ।
काठमाडौं उपत्यकाका सवारी साधनलाई केही व्यवस्थित गरेर भीड नियन्त्रण गर्न भन्दै टाइम कार्ड लागु गराईएपनि सरकारको निर्णय बिपरित सडकमा आउनेहरु बढेपछि आईतबार मात्रै हजारौँ कारबाहीमा परे । आइतबार काठमाडौंका सडकमा देखिएका दृश्यले त लकडाउन हटिसकेको हो कि भन्ने आभास गराएको छ । कार्यालय समयमा अर्थात बिहान बेलुका खुल्ला हुने सडक क्षेत्रमा अहिले जाम सुरु हुन थालेको छ ।
उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, ट्राफिक प्रहरी लगायतका सरोकारवाला निकायहरूबीच भएको छलफलले निर्माण सामग्री बोकेका ठूला ट्रकहरु, अस्पताल, बित्तिय संस्था, बैंक, सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाईहरुलाई समय तालिका अनुसार सवारी सञ्चालनको छुट दिनेगरि ल्याइएको टाइम कार्ड यस्तो छ ।
–सरकारी कार्यालयलाई बिहान ९ बजेदेखि साढे १० बजेसम्म र घर फर्कन बेलुकी ५ बजेदेखि ६ बजेसम्म समय ।
–बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूका लागि बिहान ९ बजेदेखि साढे १० बजेसम्म कार्यालय जाने र बेलुका साढे ३ बजेदेखि ५ बजेसम्म फकिने समय ।
–खाद्यान्न, तरकारी तथा अत्यावश्यक खाद्य सामग्री बिहान १० बजेभित्र ढुवानी गरिसक्नुपन
–निमाण सामग्री बोकेका ठूला सवारीलाई बेलुका ८ बजेदेखी बिहान ६ बजेसम्म उपत्यकाभित्र प्रवेश गर्न समय ।
–खानेपानी तथा औषधिका सवारी साधान भने निर्वाध गुड्न पाउने ।
हुनत, काठमाडौं लगायतका शहरी क्षेत्रका सडकमा लकडाउकै समयमा समेत दैनिक सयौँको संख्यामा उल्लंघनकर्ताहरु कारबाहीमा पर्थे । लकडाउन केही खुकुलु बनाएपछि हजारौँ सडकमा आउनु स्वभाविक जस्तै देखिएपनि यसरी बढ्ने भीडभाडको जोखिम रोक्नेतर्फ सरकार र व्यक्ति स्वयम जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।
कोरोना संक्रमित पनि बढ्ने अनि सडकमा सवारी साधनको भीडभाड पनि बढ्दा लकडाउनको अवधि जेठ ५ बाट हट्छ वा लम्बिन्छ, अहिले नै यसै भन्ने अवस्था छैन ।